Drafitra 4-teboka hanovana ny mpanjifanao B2B ho Evanjelisitra marika | Martech Zone
Raha mandany hariva any amin'ny tanàna izay mbola tsy notsidihinao taloha ianao ary nanana tolo-kevitra fisakafoanana roa, ny iray avy ao amin'ny trano fandraisam-bahiny hotely ary ny iray avy amin'ny namanao, dia mety hanaraka ny torohevitry ny namanao ianao. Amin'ny ankapobeny dia mahita ny hevitry ny olona fantatsika sy tiantsika kokoa isika noho ny tolo-kevitry ny olon-tsy fantatra - marina izany toetran'ny olombelona.
Izany koa no antony fampiasam-bola ataon'ny marika amin'ny mpanjifa (B2C) amin'ny fampielezan-kevitra influencer - ny tolo-kevitra momba ny namana dia fitaovana fanaovana dokambarotra mahery vaika. Izy io dia miasa toy izany amin'ny tontolon'ny asa aman-draharaha (B2B) koa. Tamin'ny andro taloha, ny mpanjifa mety dia hifandray amina mpivarotra, hamaky fikarohana momba ny indostria na hisintona bokikely fivarotana. Ankehitriny dia mijery ny namany izy ireo ary saika 95 isan-jato mamaky hevitra amin'ny Internet.
Hatramin'ny nandraisan'ny mpanjifanao B2B dingana maro Alohan'ny hiresahan'izy ireo amin'ny rep mpivarotra dia anjaran'ny marketing ny mamboly fitarika eo an-tampon'ny fantsom-pivarotana amin'ny fomba mahomby indrindra. Ary ny fitaovana fanaovana dokambarotra mahomby indrindra dia ny evanjelista marika - ny mpanjifa izay tia ny vokatrao ary vonona hizara ny zavatra niainany amin'ny namany. Ity misy drafitra iray hanampy anao hamorona tafika evanjelisitra marika:
Dingana 1: Mifantoha amin'ny fahombiazan'ny mpanjifa
Amin'ny faran'ny andro dia tian'ny mpanjifa B2B ny vokatrao satria manampy azy ireo hahomby amin'ny asa izy ireo. Noho izany, hamoronana evanjelisitra marika, ataovy izay hahatonga ny fahombiazan'ny mpanjifa ho tanjona voalohany. Tsy maintsy ampidirina amin'ny kolontsain'ny orinasanao izy io, ary ny mpiasa tsirairay amin'ny anjara asany rehetra dia tokony hahatakatra fa ny iraka farany ataonao dia ny manampy ny mpanjifa hahomby.
Teboka iray hafa tsy tokony hadino fa ny zavatra refesina dia izay vita, koa ataovy izay hahombiazan'ny mpanjifa ho metrika fampisehoana mpiasa lehibe amin'ny laharam-pahamehana amin'ny fitazonana. Ny fanampiana ny mpanjifa amin'ny famahana olana (fanohanan'ny mpanjifa) ary ny fitadiavana ireo tombony ambony (varotra) dia zava-dehibe, fa ny zava-drehetra dia tsy maintsy miverina amin'ny tanjon'ny fahombiazan'ny mpanjifa.
Dingana 2: Mifampiresaha aloha sy matetika
Ny fifandraisan'ny mpanjifa dia zava-dehibe amin'ny dingana rehetra amin'ny fifandraisana, saingy hevitra tsara ny mametraka fenitra amin'ny andro voalohany, toy ny varavarankely 24 ora ho an'ny ekipa fahombiazan'ny mpanjifa manantona rehefa tonga eny an-tsena ny mpanjifa vaovao. Ny fifandraisana mialoha dia mamaritra ny feo ary manamarika ny fanolorantenanao amin'ny fahombiazan'ny mpanjifa vaovao.
Soso-kevitra ihany koa ny hametrahana touchpoint mahazatra hahafahanao mahazo antoka fa azonao ny laharam-pahamehana sy ny tanjon'ny mpanjifa, izay hiova rehefa mandeha ny fotoana. Ny fifandraisana tsy tapaka dia miantoka fa ny ekipanao dia manara-baovao hatrany amin'ny tanjon'ny mpanjifa, ary mety hanome anao fampitandremana mialoha ihany koa izany momba ny olana iray vao misondrotra mba hahafahanao manamboatra azy io ary mitazona ny fifandraisana tsy tapaka.
Dingana 3: Ataovy izay hiarahan'ny ekipa fahombiazan'ny mpanjifa sy ny varotra
Raha azo atao dia asao ny ekipan'ny varotrao hitondra ny latabatry ny fahombiazan'ny mpanjifa alohan'ny hanakatonana ny fifanarahana. Ity dia fomba tsara hanehoana ny fanolorantenanao amin'ny fahombiazan'ny mpanjifa, ary manome ny vondrona fahombiazan'ny mpanjifa ny fotoana hananganana fifandraisana alohan'ny hisian'ny olana ara-panohanana.
Tombony iray hafa amin'ny fiaraha-miasa mahomby amin'ny varotra sy ny mpanjifa ny fahazoany ny tsirairay amin'ny pejy iray momba ny andrasan'ny mpanjifa ary manome fotoana ny tsirairay handrefesana ny haavon'ny fanohanana ilain'ny mpanjifa vaovao hahomby amin'ny fampiharana azy. Ilaina ny fizarana asa malefaka amin'ny fahombiazan'ny mpanjifa - sy ny fifandraisana anatiny.
Dingana 4: Rehefa manao hadisoana ianao dia miala tsiny ary amboary izany
Tsy misy olona tonga lafatra, na ho ela na ho haingana, ny ekipanao dia hanao fahadisoana izay misy fiantraikany amin'ny mpanjifa. Ny fomba fitantananao azy dia hitantara amin'ny mpanjifa betsaka ny fanoloranao tena hahombiazana. Ny mpiasa dia tokony hanana hadisoana, miala tsiny ary mifantoka amin'ny famahana ny olana fa tsy hiodina amin'ny fanomezan-tsiny na hiaro tena.
Ny fifandraisan'ny mpanjifa tsy tapaka dia tokony hanome anao fotoana handaminana ireo olana alohan'ny hamoahana ny besinimaro. Fa raha mahazo famerenana ratsy ianao dia aza matahotra - mbola azo atao tsara ny manamboatra azy io, ary raha tantinao tsara izany dia azonao atao ny manamafy ny fifandraisana. Aza adino koa izany 89 isan-jato ny mety ho mpanjifa mamaky ny valin'ny orinasa manamarina ny fanamarihana ratsy
Ho hitanao fa ny dingana rehetra amin'ity drafitra teboka efatra ity dia mitaky fahombiazan'ny mpanjifa. Io no ivon'ny drafitra rehetra hanovana ny mpanjifa ho ambasadaoron'ny marika. Ny fanolorana tchotchkes, fifamatorana amin'ny kaonferansa, ny fahatsiarovana ny anaran'ny mpiara-miasa sy ny ankizy, sns., Dia afaka manorina fifandraisana eo amin'ny samy olona. Fa amin'ny farany, ny zava-dehibe indrindra dia ny fanampiana ny mpanjifanao hanao ny asany amin'ny fomba mandaitra kokoa.
Noho izany, tadidio fa manana vondron'olona mety hiteraka influencers ianao: ny mpanjifanao. Mifantoha amin'ny fahombiazan'izy ireo, mifandraisa amin'izy ireo, mandrindra fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miasa aminao, ary mahazoa hadisoana mba hahafahanao manamboatra lesoka haingana. Rehefa apetrakao io drafitra teboka efatra io, dia ho afaka mamorona fototr'ireo mpankafy mikorontana ianao, ary izany no karazana doka izay tsy azonao vidiana amin'ny vidiny rehetra.
Tags: mpisolo vava marikaambasadaoro marikafitoriana filazantsara marikafitoriana ny filazantsarahevitra ratsy
Ahoana no ahafahan'ny mpitantana mampiasa ny data Analytics mba hanatsarana ny fahombiazany